ढाक्रे बन्ने कि भागमा आएको प्रधानमन्त्री खाने :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
प्रचण्डलाई आफ्नै कार्यकर्ताको प्रश्न
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको दुई दिने भ्रमणले सत्तामा जान खुट्टा उचालेर बसेको एमाले, माओवादी र मधेसी दलहरूलाई एक अर्काप्रति शंका गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ । खासगरी मधेसी दलहरूलाई सरकार बनाउनुस्, सहयोगको चिन्ता नगर्नुस् भन्ने स्वराजको भनाइले माओवादीको बार्गेनिङ पावर घटाइदिएको छ भने एमालेले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न आएको हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरेको छ ।
घुक्र्याउने र धम्क्याउने एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको कार्यशैली बुझेको भारतले उनलाई उत्तरतिर नलहसिन इन्गेजमेन्टको रणनीति लिएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै देखिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको निमन्त्रणमा नेपाल आएकी भारतकी विदेशमन्त्री स्वराजले अरु नेताहरूसँग भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेको कुराकानीको गुदी खोज्ने क्रम सुरु भएको छ । उनले अरु पार्टीका नेताहरूसँग आधा घन्टादेखि पौने घन्टासम्म कुरा गरिन् भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग करिब डेढ घन्टा कुराकानी गरेकी थिइन् ।
तुरुन्त प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर छाडेर दुई वर्षसम्म ढाक्रे हुन प्रचण्ड तयार छैनन् कि भन्ने उनको बुझाई रहेको अनुमान गरिएको छ । दुवै मधेसी दलले सहयोग गर्ने वातावरण आफूले मिलाइदिन लागेको भन्दै प्रचण्डले साथ नदिए पनि विचलित नहुन उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आश्वासन दिएको समाचार एकपक्षीय ढंगले आएको छ । स्वराजसँगको भेटघाटपछि प्रचण्ड केही निराश देखिएका छन् । भारतले मधेसी दल र एमालेबीच गठबन्धन गराइदिन लागेको आशय प्रचण्डले आफ्ना निकटस्थहरूसँग प्रकट गरेका छन् ।
सत्ताको साँचो बोकेर बसेका कारण भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले प्रचण्डलाई अलि धेरै समय दिएको अनुमान गरिए पनि यति लामो अवधिसम्म के के कुराकानी भयो ? भन्ने कुरा सबैका लागि खुल्दुलीको विषय बनेको छ । स्वराजसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले घुमाउरो ढंगले यस विषयमा जिज्ञासा राखेको दिवा भोजमा सहभागी एक नेताले बताए । उनीहरूको जिज्ञासा थियो– ‘आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन नगर्ने कुरा प्रचण्डले बताए भनेर अनलाइनहरूले समाचार लेखेका छन्, यो कुरा सत्य हो कि ?’ यो जिज्ञासामा स्वराजले भनिन्– ‘पार्टी एकीकरणमा किन ढिलाइ गर्नुभएको हो भनेर मैले प्रचण्डजीलाई कुरा राखेकी थिएँ, उहाँले भन्नुभयो, पार्टी एकीकरणपछि मात्रै सरकार निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ, तर ओलीजी भन्नु हुन्छ पहिले सरकार गठन गरौं, त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्दै गरौंला ।’
समाचार स्रोतका अनुसार आफू पार्टी अध्यक्ष बनेपछि मात्रै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने आशय प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग प्रकट गरेका थिए । ओलीले सुरुको दुई वर्ष आफैं प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्ने, त्यसपछिको तीन वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाइदिने आश्वासन दिएको बुझाई स्वराजको छ । यस विषयमा उनले ओली र प्रचण्ड दुवैको मनपेट बुझेकी छन् । तर उनले कस्तो सुझाव दिइन् ? स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
तुरुन्त प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर छाडेर दुई वर्षसम्म ढाक्रे हुन प्रचण्ड तयार छैनन् कि भन्ने उनको बुझाई रहेको अनुमान गरिएको छ । दुवै मधेसी दलले सहयोग गर्ने वातावरण आफूले मिलाइदिन लागेको भन्दै प्रचण्डले साथ नदिए पनि विचलित नहुन उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आश्वासन दिएको समाचार एकपक्षीय ढंगले आएको छ । स्वराजसँगको भेटघाटपछि प्रचण्ड केही निराश देखिएका छन् । भारतले मधेसी दल र एमालेबीच गठबन्धन गराइदिन लागेको आशय प्रचण्डले आफ्ना निकटस्थहरूसँग प्रकट गरेका छन् । गत शुक्रबार प्रचण्डले धुलिखेल पुगेर आफ्ना निकटस्थसँग भनेका छन्– ‘पार्टी एकीकरणका लागि एमाले तयार देखिएन, एमालेले दिन्छ भन्ने आशा राख्दै दुई वर्ष ढाक्रे बनेर बस्ने कि ? कांग्रेसको समर्थनमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने ? भन्ने विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
एमाले र मधेसी दललाई भारतले नजिक ल्याउन लागेकाले आफ्नो बार्गेनिङ पावर समाप्त हुनेमा प्रचण्ड सशंकित छन् । पम्फा भुसाल, अग्नि सापकोटा, टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष स्वीकार गर्दै दुई वर्ष पर्खनुको विकल्प नभएको सुझाव प्रचण्डलाई दिएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– ‘हामीले बार्गेनिङ बढाउँदै लग्यौं भने भारतले एमाले र मधेसी दललाई मिलाइदिन्छ, त्यसपछि हाम्रो बार्गेनिङ सामथ्र्य समाप्त हुन्छ ।’
Tarun Khabar0response बिहिबार,२५ माघ २०७४ 508 Views